“CDM စစ်သား” ကာတွန်း။
“ဒီဒေး”ကဗျာနဲ့အတူ . . .
#နွေဦးအသံ #အမှတ်၅၄ #newspamphlet
အလွယ်တကူလက်ဆင့်ကမ်းဖတ်နိုင်ပြီး နေ့စဉ်ထွက်ရှိနေမယ့် “နွေဦးအသံ” Daily News Pamphlet လေးပါ။
Like – 5.6K Share – 589
Winn Myint says:
2021-05-29 at 9:41 AM
Warmly Welcome .
Thank you so much for your cóntribution .
2021-05-29 at 9:48 AM